भिडियो – Gandaki Chhadke Nepal
पूर्वलडाकुले सरकारलाई दियो च्यालेन्ज !! सरकारले सक्दैन भनाेस्,पूर्वलडाकूले फिर्ता ल्याउछ लिपुलेकः- लेनिन..हेर्नुहोस् भिडियो ।
November 8, 2019 News DeskLeaveaComment on पूर्वलडाकुले सरकारलाई दियो च्यालेन्ज !! सरकारले सक्दैन भनाेस्,पूर्वलडाकूले फिर्ता ल्याउछ लिपुलेकः- लेनिन..हेर्नुहोस् भिडियो ।
पूर्वलडाकूले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि लिपुलेक लगायत क्षेत्र फिर्ता ल्याउन सरकार पछाडि हटेको खण्डमा फिर्ता ल्याउन आफूहरु मैदानमा आउन तयार रहेको बताएका छन् । अनलाइनपाना डटकमसँग कुराकानी गर्दै पूर्वलडाकूहरुको संगठनका ईन्चार्ज लेनिन विष्टले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायत नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सक्दैनौं भनेका भोलिपल्टै बहिर्गमित पूर्वजनसेना नेपाली युवाहरुका साथ मैदानमा उत्रने बताए । सरकार […]
हस्पिटलको लुटतन्त्र..मृ’त्यु भईसकेको मान्छेलाई४० दिनसम्म अस्पतालले भेन्टिलेटरमा राखेर ४० लाख झ्वाम..हेर्नुहोस् भिडियो
November 3, 2019 November 3, 2019 News DeskLeaveaComment on हस्पिटलको लुटतन्त्र..मृ’त्यु भईसकेको मान्छेलाई४० दिनसम्म अस्पतालले भेन्टिलेटरमा राखेर ४० लाख झ्वाम..हेर्नुहोस् भिडियो
काठमाडौं। पछील्लो समय डक्टरको चरम लाप र्वाहिले धेरै निर्दोषको ज्या न गएको खबर निक्कै बाहिरिन थालेको छ । कैयौ अस्पतालको नाम बारम्बार दोहोरिन्छ त कैयौ फटाफट मुछिने गरेको छ । यस्तैमा त्रिउरेश्वरको ब्लु क्रस अस्पतालको नाम सोही लिस्टमा चढेको छ। कारीब ४० दिन अघी सेर बहादुर केसी नामका ब्यक्ती आँफैले स्कुटर चलाएर अस्पातल आई भर्ना […]
९० बर्षे हजुरबुवा लट्ठी टेक्दै सहयोग लिएर अर्चनाको डेरामा, आमाको उपचारको लागी पानी बेच्न नपर्ने..हेर्नुहोस् भिडियो ।
October 22, 2019 News DeskLeaveaComment on ९० बर्षे हजुरबुवा लट्ठी टेक्दै सहयोग लिएर अर्चनाको डेरामा, आमाको उपचारको लागी पानी बेच्न नपर्ने..हेर्नुहोस् भिडियो ।
एउटी अबोध कलिली बालिकाले कमाएर घरपरिवार पाल्छिन् भन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ । तर बास्तबमै ९ वर्षीय बालिकाले आफ्नो आमा बचाउन काम गर्दै र आफु पनि पढ्दैछिन् । यति सानै उमेरमा आफ्नो आमाको लागि यति धेरै दुख गरि बसन्तपुर क्षेत्रमा पानि बेच्ने काम गर्छिन् अर्चना पराजुली । उनि अहिले कक्षा ३ मा पढ़छिन । पढाईमा पनि […]
१ बर्षअघि डस्टबिनमा भेटिएका बालक यति राम्रा भए, शिशिर परे चकित..हेर्नुहोस भिडियो ।
October 22, 2019 adminLeaveaComment on १ बर्षअघि डस्टबिनमा भेटिएका बालक यति राम्रा भए, शिशिर परे चकित..हेर्नुहोस भिडियो ।
१ बर्ष अघि डस्टबिनमा फालिएका बालक यति राम्रा भएका छन । आज हामी पुगेका छौं, ललितरको कसुन्ती हाईटमा रहेको एउटा पवित्र ठाउ,-नेपाल स्नेही काखमा । मनारोगी दिदी बहिनीहरु र उनीहरुबाट जन्मेका सन्तानहरुले नव जीवन पाउने थलोमा आज हामी बाबु भविष्यको जन्मलिन मनाउन पुगेका थियौं । एक बर्षअघि पशुपछि क्षेत्रमा फोहोरको डस्टबिनमा फालिएको अवस्थामा भेटिएका भविष्य […]